eye diseases – Healthy Life Journal
အတွင်းတိမ်က ကျောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. တချို့ လူနာတွေက အတွင်းတိမ်က ကျောက်ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေလို့ ပြောကြတယ်။ A. မျက်လုံးအတွင်းတိမ်က နုရာကနေ ရင့်လာတယ်။ အဲဒီလို ရင့်တဲ့အခြေအနေမှာ...
မျက်စိအတွင်းတိမ် ခွဲစိတ်ပြီးချိန် လူနာတို့ လိုက်နာသင့်သည့် အချက်များ
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိအတွင်းတိမ်ကို ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ လူနာတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အတွင်းတိမ်ခွဲစိတ်ပြီးချိန်မှာ ဆောင်သင့်/ရှောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Intraocular Surgery...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်ခမ်းရောင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပြတတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်ခမ်းရောင်တဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေက မျက်ခမ်းကထူပြီး ရောင်နေမယ်၊ ယားနေမယ်။ မျက်စိကနီနေမယ်။...
သွေးကျဲဝေဒနာရှိသူ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူလျှင်
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကျွန်မအသက် ၇၀ ရှိပါပြီ။ သွေးကျဲဝေဒနာလည်း ရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိချင်တာက သွေးကျဲတဲ့ဝေဒနာ ခံစားနေရသူတွေမှာ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရင် အခက်အခဲရှိပါသလား ဆရာ။ Daw Mya (FB)...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေ ကျောက်မျက်လုံးထည့်တာ သင့်တော်ပါသလား။ A. ကျောက်မျက်လုံးထည့်တယ်ဆိုတာ မျက်လုံးကို ခြစ်ထုတ်ပြီး ကြည့်လို့ကောင်းအောင် ကျောက်မျက်လုံး ထည့်လိုက်တာပါ။ အဲဒီလို ကျောက်မျက်လုံး ထည့်လိုက်ရင် မျက်လုံးကို ခြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်...
—၊ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. မျက်စိအတွက် ဘယ်လိုဗီတာမင်ဓာတ်တွေက အရေးပါပါသလဲ ဆရာ။ A. မျက်စိအတွက် အဓိကလိုအပ်တာက ဗီတာမင် အေ၊ ဗီတာမင် ဒီ၊ ဗီတာမင် အီး...